Milkiilaha kooxda Liverpool John W. Henry oo sheegay inuusan fahmin sababta ay ku baxeen Suarez iyo Coutinho – Gool FM
(Liverpool) 24 Maajo 2018. Milkiilaha kooxda Liverpool ee reer Mareykan John W. Henry ayaa sheegay inuusan fahmin sababta Luis Suarez iyo Philippe Coutinho ay ugu dhaqaaqeen kooxda Barcelona.
John W. Henry ayaa wuxuu u sheegau Liverpool Echo: “Malaha maxaa yeelay waxaan ahay qof Mareykan ah, lakiin waxaan wajahayaa adag ee ku aadan inaan fahmo sababta uu qof walba u doonayo inuu ka tago Liverpool”.
“Koox hodan ku ah taariikhda iyo dhaqanka, waxaana ku xiran malaayiin taageerayaal ee ku kala sugan aduunka, waxay jamaahiir ku leeyihiin ku dhawaad waddan kasta”.
“Way adag tahay in la fahmo sababta ay ciyaartoydoodu u doonayaan inay u dhaqaaqaan horyaal tartankiisa uu daciif yahay, waxay ciyaaraan 30 kulan ama ka badan hadana waxay sugayaan Champions League”
“Waxay daawan doonaan isbuucan kulanka finalka Champions League, waxaa suuragal ahayd inay ciyaaraan, laakiin waxaan qabaa in qof walba ee ka tirsan waaxda isboortiga uu shaqo fiican qabtay”.
“Jürgen Klopp wuxuu qabtay shaqo weyn si aan u soo gaarno halkan, wuxuu ahaa mid wax ku ool ah oo qof walba dhiiri geliyay, kaliya ma ahan in ay finaalka jiraan ciyaartoyda, waxay heli doonaan taageerid la mid ah mida ay ku heli jireen garoonka Anfield”.